मर्दिखोला शैक्षिक प्रतिष्ठानद्वारा शैक्षिक सामाग्री वितरण — donnews.com
'कास्कीका विभिन्न विद्यालयलाई शैक्षिक सामाग्री र गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण'
पोखरा । मर्दिखोला नेपाल शैक्षिक प्रतिष्ठानले कास्कीका विभिन्न विद्यालयलाई शैक्षिक सामाग्री र गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । प्रतिष्ठानको २२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा करिब साढे ३ लाख बराबरको शैक्षिक सामाग्री तथा छात्रवृत्ती वितरण गरेको हो ।
प्रतिष्ठानले कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित निष्पक्ष माविलाई ९० हजार बराबरको विज्ञान सामाग्री, पुरन्चौरको विन्धेश्वरी माविलाई ४० हजार बराबरको पुस्तक, धम्पुसको उदय माविलाई २० हजार बराबरको पुस्तक र क्रमश धम्पुसको पृथ्वीनारायण मावि, भुजुङखोलाको माछापुच्छ्रे मावि र हेम्जाको विष्णुपादुका माविलाई १०/१० हजार बराबरको पुस्तक वितरण गरेको छ । त्यस्तै कास्कीका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार १५ विद्यार्थीलाई प्रतिष्ठानले १० हजारका दरले छात्रवृत्ति समेत वितरण गरेको छ ।
कार्यक्रममा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले विद्यार्थीको आर्थिक अभावले शैक्षिक क्षेत्रमा अगाडी बढ्न नसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानको कामले सहयोग पुगेको बताए । साथै उनले विद्यालयले पाएको सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग गरिदिन आग्रह गरे ।
त्यसैगरि माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष जुमबहादुर गुरुङले प्रतिष्ठनले गर्ने सहयोगलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे । त्यस्तै सोही ठाउँको बराह माविका प्रधानाध्यापक नरबहादुर गुरुङले प्रतिष्ठानको प्रशंसा गर्दै प्रतिष्ठानले शैक्षिक क्षेत्रमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि सहयोग गरिरहेको जानकारी दिए ।
त्यस्तै निष्पक्ष मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पूर्ण गिरीले सहयोग प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्राप्त भएको सामाग्रीको उचित उपयोग गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । निष्पक्ष माविका प्राचार्य दुर्गा बहादुर रावतले विद्यार्थीले विज्ञान प्रविधिलाई चिन्नलाई प्रतिष्ठानको सहयोग प्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य प्रतिष्ठानका कार्यसमिति सदस्य सूर्य गिरीले राखेका थिएभने संचालन प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष अनिल लामिछानेले गरेका थिए ।
प्रतिष्ठानले विगत २२ वर्षदेखि विद्यार्थीको उज्वल भविष्यको योजनामा टेवा पु¥याउन शैक्षिक सामाग्री र छात्रवृत्ती प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।